N'inona n'inona hitranga Jesoa... | news2dago |
N'inona N'inona Hitranga Jesoa...
news2dago 22 Oktobra, 2009 08:54 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Miaratsy ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra ankehitriny ary vao maika izany nahazo vahana tao anatin'izao krizy izao. Mijaly ny vahoaka malagasy tsy hita intsony izay hianteherana ny mpitandro ny filaminana izay tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany indray ity mbola variana any @ fiambenana ny kianja malalaka isan-karazany. Dia efa tsy mahagaga fa miaro ny sezan-dry zalahy no tena marina.
Fa hiverenako @ izay ilay lohateny nofidiko androany io izay tononkalon'i Rado ary hiraina any @ fihirana protestanta. Notsongaiko satria dia mavaivay tokoa ny fampahorina sy fitsapana mahazo ireo mpino sy mpitandrina Fjkm ankehitriny ary dia gaga mihitsy ary aho fa dia lasa vazivazy fampiasan'ireo olona sasany ankehitriny ny hoe:"Ataoko ohatran'ny protestant eo an" izay entina milaza ny hoe:"Ataoko minan'ny amaniny eo an". Dia sanatria ve efa tonga any @ izany famingavingana ny fiangonana isika @izao. Vao omaly ohatra ny filoha ny Fjkm no nitaraina fa misy manafika ireo mpitandrina eto an-drenivohitra ary misy koa rahonana. Vao fantatr'ireo jiolahy oe misy alahadin'ny mpitandrina ny alahady dia efa tonga izy ny alina hanamboatra ilay mpitandrina. Mampieritreritra ihany ny hoavin'ity firenena ity rha izany.
Eto aho dia te hanamarika fa nisy resaka henoko t@ olona nitantara fa efa nisy olona nanana tsindrimandry (vison) nitantara ny zavatra hitranga rehetra ary efa miha-tanteraka ilay izy amin'izao fotoana izao. Dia izany "Mama Germaine" izany no nanao famelabelaran-kevitra teny mandriambero toby ny LLB fa tsy maintsy hisy fahorina mafy ho diavina eto ary isika kristiana no tian'ny Tompo hiverina any aminy ary ho diovina avokoa ny malagasy ary ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc satria avy aminy no hiavin'ny fampandrosoana ny malagasy satria efa voasedra izy.
Efa noteteziny avokoa ireo mpitondra ao @ Fat rehetra ireo ary na ny solombavam-bahoaka teo aloha rehetra ary dia nisy ihany koa no nandray izany olona izany teo ireo nandray teo kosa anefa ireo nandà mafy ny tsy handray azy mihitsy dia anisan'izany Atoa Andry Rajoelina. Milaza moa izy fa tokony hiala amin'izay ireo mpitondra fat ireo satria efa vita ny iraka nampanaovina azireo kanefa dia tsy nanaiky ireo. Singanina amin'izany koa fa nandray azy antanan-droa kosa ingahy Monja Roindefo ary nomarihiny mihitsy ary ny oe misy iraka mbola ilana anao miaraka amin'i Filoha Ravalomanana. Tsy resy lahatra moa Atoa Roindefo ka mbola nisalasala sy te hifikitra @ toerany ihany.
Izany sy izany no vaovao henoko ary ialako tsiny fa amin'ny ambangovangony ihany no voatantarako aminareo eto fa lava dia lava ilay izy ka ireo aloa no masaka azoko atolotra anjarantsika no mandray izay tandrify antsika amin'izany. Ny azoko tenenina fotsiny dia ny hoe ho avy ny farany ary tsy maintsy ho ravana izao tontolo izao fa feno loatra ny loto sy ny mpandoto azy.